काम र समय | आरोह अवरोह.....
काम र समय
Posted on Saturday, August 27, 2011 No Comments
ला!अलराम बजेको त पत्तै पाइनछु, अब ढिलो हुनेभो काममा जानलाइ पनि । खावाई(जापानी नाम) बिहान आंतिदै थिए ।
हुन त हिजो बेलुका देखि नै उनको सन्चो पनि थिएन । टाउको पनि दुखेको थियो अनि ज्वोरो पनि आएको थियो त्यसैले पनि होला आज ५ पटक सम्म अलराम बज्दा पनि चाल पाउन नसकेको होला ।
तरपनि सकिनसकी उठ्ने कोसिस गर्छन, टाउको अझै पनि टिनटिन दुखिरहेको हुन्छ, ज्वोरो पनि त्यस्तै हुन्छ ।　तर उ काममा जानको लागि लुगसुगा लगाउन तयार हुन खोज्छ ,तर सक्दैनन । खाट बाट उठ्न खोज्छ , तर उठ्न पनि सक्ने अवस्था हुदैन । उसलाई रिंगटा लागेको अनुभब हुन्छ, ढल्न खोज्छ, अनि बिस्तारै फ्रिज खोलेर जुस खान्छन ।
सानो तिनो बिरामी भए पनि जापानमा बिदा दिने चलन हुदाहुदै पनि उनले बिदा माग्नको लागि काममा फोन गर्ने कुनै कोसिस सम्म पनि गर्दैन । बरु कसरि काममा समयमा नै पुग्ने हो? त्यतातिर उनको ध्यान हुन्छ, किनकि उनलाई थाहा छ कि जापानमा काम र समयको महत्व कति हुन्छ भनेर ।
हतारहतार लुगा लगाएर, सकिनसकी ट्रेन स्टेसन तिर दौडिन्छन उनि केहि खानै नखाई । बीच बीचमा उनि घडी हेर्छन । उनीसंग थोरै समय मात्र बाँकि हुन्छ काममा पुग्नको लागि । त्यसैले झन् दौडाइको रफ्तार अझ बढाउछन् ।
तर उनले सधै चड्ने ट्रेन छुटिसकेको हुन्छ जतिसुकै दौडे पनि ।
ट्रेन आइरहेको आवाज सुनेर स्वाँस्वाँ गर्दै स्टेशन को सिंडी उक्लन्छ. । ८० को स्पिडमा कुदिरहेको ट्रेन एकछिन यात्रु भर्न रोकिएको हुन्छ । खावाई आँखै नहेरी ट्रेन भित्र छिर्न खोज्छ, त्यहि दुर्भाग्यबस ट्रेनको ढोका बन्द भै चल्न थाल्छ । खावाई सान त्यहि ८० को स्पिडमा चलेको ट्रेनमा ठोक्किन्छन बेजोड तरिकाले । र on the spot उनको मृत्यु हुन्छ कि, उनको मुखबाट आया! भन्ने आवाज सम्म पनि आउन पाउदैन ।
उनको मुखबाट रगत बगिरहेको हुन्छ, एउटा हात भांचिएको अबस्थामा हुन्छ ट्रेन ले पनि अर्जेन्ट ब्रेक लगाउछ र रोकिन्छ । तर उनलाई उठाउन, त्यहाँ प्रहरी बाहेक अरु कोहि जापानीहरु पनि आउँदैनन, किनकि उनीहरु पनि आआफ्नै काममा जानको लागि हतारिदै दौडिरहेका थिए ।
फोटो : एउटा उदाहरण मात्र हो ।